Tupu ịnyefee - AfricArXiv
Ozi izugbe tupu ịnyefe
Kedu ihe kpatara ị ga - eji kesaa nsonaazụ nyocha gị na ebe ndebiri akwụkwọ?
Akwukwo ndi edeputara edere n'elu akwukwo AfricanArxiv kwere free na ngwa ngwa mgbasa na mkparịta ụka ụwa nke ihe nyocha tupu ebipụta ya na akwụkwọ nyocha ndị ọgbọ.
A ga-enye edemede niile edepụtara CC BY Ikike 4.0 na a DOI (ihe njirimara dijitalụ) tinyekwa ederede na Google Scholar. Mgbe ị na-eji ha, na karịchaa mgbe ina-ekwu maka ya, akara a ga-egosipụta akara nke ọma.
Biko rụba ama: AfricaArXiv abụghị akwụkwọ edemede na anaghị enyocha ogo sayensị nke ihe odide na nkọwa niile. Ozugbo ihe odide gachara ọkwa ma bipụta ya, ọ na-adịgide na sistemụ ahụ ruo mgbe ebighi ebi. Anyị na-edobe ikike iwepu ihe odide mgbe e bipụtachara ma ọ bụrụ na amata wayo ma ọ bụ ihie ụzọ.
Anyị na-akwado mmekorita obodo site na ịza ajụjụ na ịkekọrịta nkwadebe. GỤKWUO na info.africarxiv.org/peer-review.
Lelee maka ntinye akwukwo na oge nnabata: jiri SHERPA / RoMEO Oru aka ileba anya n’usoro ide akwukwo maka ihe omuma banyere uzo idebe onwe gi maka akwukwo nke ị n’ebede ibiputa edemede gi.
Anyị na-akwado nkwenye sitere na
Ndị Sayensị Africa sitere na mpaghara Africa
Ndị Sayensị Afrịka bụ ndị guzobere ugbu a n'ụlọ njikọ ndị dị na mpụga Africa
ndị sayensị na-abụghị ndị Afrịka na-akọ banyere nyocha emere na mpaghara Africa; ọkacha mma na ndị ngalaba ngalaba Africa edepụtara
ndị sayensị na-abụghị ndị Afrịka na-akọ banyere nyocha metụtara ihe ndị metụtara Africa
Anyị na-anabata ụdị akwụkwọ ọgụgụ ndị a - akwụkwọ edemede ma ọ bụ akwụkwọ mmado:
Nsonaazụ 'adịghị mma' na nsonazụ 'adịghị mma (ya bụ nsonaazụ na-anaghị akwado hypothesis)
Akwụkwọ data na usoro
Akwụkwọ nkọwa data
Ntughari nke ihe di n’elu
A ga-atụle ụdị usoro ndị ọzọ mgbe edobere ha.
Tinye mgbakwunye faịlụ na data
Nwere ike ịgbakwunye ma jikọta na mmezi faịlụ na usoro ọ bụla yana nchekwa na-akparaghị ókè.
E bipụtara isiokwu nyocha
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ike ịdekọ ihe odide edepụtagoro dịka isiokwu akwụkwọ, gaa kedu ka.comcanishareit.com ma hichaa ederede DOI na nkpuchi ọchụchọ; lelee ma ọ bụrụ na 'dị ka mbido akwalite' n'etiti akwụkwọ mbipụta anabatara.
Ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-anakwere ide akwụkwọ ndebanye akwụkwọ, ụfọdụ ekweghị. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, lelee Sherpa / RoMEO nchekwa data.
Kwadebe ihe odide gị
Bulite ihe odide gị dịka faịlụ PDF.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ enyemaka na nhazi, ị nwere ike iji ndebiri ederede na-esote nke otu ndị otu ntinye aka nke AfricaArXiv jikọtara.
Akwụkwọ edemede-template_AfricArXivBudata site na ntaneetị
Tinye ndetu na peeji ihu n'ihu "Nke a bụ akara ngosi edebanyela aka maka akwụkwọ edemede XXX" ebe enwere ike Ozugbo enwetara ihe odide ahụ site na akwụkwọ nyocha ndị ọgbọ na-enyocha ya, ị nwere ike imelite akwụkwọ edemede ahụ na postprint ma ọ bụ nabatara akwụkwọ edemede edemede ma gbanwee ederede a "Nke a bụ mpempe akwụkwọ postpiapiapigharịrị na nyocha ndị ọgbọ ma nabata ya na akwụkwọ akụkọ XXX."
Biko gba mbọ hụ na ị sọpụrụ ọdịnaya nwebiisinka na ikike ikike dị maka faịlụ ị bugoro. Maka ihe odide ndị ọkà mmụta, ikikere a kacha eji eme ihe bụ Nweta CC-BY-SA 4.0.
Gaba n'ihu nyefee ihe ndozi gi
Ugbu a ị gụrụla ozi niile dị mkpa ị nwere ike ịtụle ma họrọ n’etiti sọksita ibe anyị ka ị nyefee ihe odide mbido akwụkwọ:
Anyi na agba mbo iru ulo akwukwo nkwuputara akwukwo n’Afrika, ya mere anyi na-erute ma soro ndi otu ya na ndi ozo ha kparita uka. Ka ọ dị ugbu a, anyị na ndị na - enye ọrụ ndozi edepụtara edebere dị ka edepụtara n'okpuru.